Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - Waxa aad akhrineyso xiga
Horudhac (qaybta 2.1)
Hal nooc oo indho-indheyn ah oo aan lagu darin cutubkan waa dad farshaxan. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Boellstorff et al. (2012) , fiiri Boellstorff et al. (2012) , iyo wax badan oo ku saabsan dadka farshaxanka ah ee goobaha dhijitaalka ah iyo kuwa jidheed, eeg Lane (2016) .
Xog weyn (qaybta 2.2)
Ma jiro hal shuruud oo la isku raacsan yahay "macluumaad weyn", laakiin qeexitaano badan ayaa u muuqda inay diirada saaraan "3 Vs": mugga, kala duwan, iyo xawaare (tusaale, Japec et al. (2015) ). Eeg De Mauro et al. (2015) dib u eegista sharaxaadda.
Isugeynta xogta dawlada ee qaybta xogta weyn waa wax aan caadi ahayn, inkastoo qaar kale ay sameeyeen kiiskan, oo ay ku jiraan Legewie (2015) , Connelly et al. (2016) , iyo Einav and Levin (2014) . Wixii intaas ka badan oo ku saabsan qiimaha xogta dawlada ee cilmi baarista, fiiri Card et al. (2010) , Adminstrative Data Taskforce (2012) , iyo Grusky, Smeeding, and Snipp (2015) .
Aragtida cilmi-baarista ee gudaha gudaha nidaamka tirakoobka dowladda, gaar ahaan Xafiiska Tirakoobka Mareykanka, eeg Jarmin and O'Hara (2016) . Si aad u hesho buug-diidmo ah qoraallada maamulka cilmi-baarista ee tirakoobka ee iswiidhishka, fiiri Wallgren and Wallgren (2007) .
Cutubka dhexdiisa, waxaan si kooban u barbar-dhigayaa baaritaan dhaqameed sida Qorshaha Guud ee Bulshada (GSS) oo leh ilaha warbaahinta bulshada sida Twitter. Si isbarbardhigi ah oo taxaddar leh oo udhexeeya baaritaanka dhaqanka iyo xogta warbaahinta bulshada, fiiri Schober et al. (2016) .
Sifooyinka guud ee xogta weyn (qaybta 2.3)
10-kii astaamood ee xogta waaweyn ayaa lagu sharraxay siyaabo kala duwan oo kala duwan oo ka mid ah qorayaal kala duwan. Qorista saamaynta fekerkayga ku saabsan arimahan waxaa ka mid ah Lazer et al. (2009) , Groves (2011) , Howison, Wiggins, and Crowston (2011) , boyd and Crawford (2012) , SJ Taylor (2013) , Mayer-Schönberger and Cukier (2013) , Golder and Macy (2014) , Ruths and Pfeffer (2014) , Tufekci (2014) , Sampson and Small (2015) , K. Lewis (2015b) , Lazer (2015) , Horton and Tambe (2015) , Japec et al. (2015) , iyo Goldstone and Lupyan (2016) .
Cutubkan dhexdiisa, waxaan isticmaalay ereyada dijital ah , oo aan u malaynayo inuu dhexdhexaad yahay. Erey kale oo caan ah oo loogu talagalay raadinta dhijitaalka ah (Golder and Macy 2014) , laakiin Hal Abelson, Ken Ledeen, iyo Harry Lewis (2008) tilmaamaya, erey ku haboon ayaa laga yaabaa inay faraha faraha ka qaadaan . Markaad sameysid rinjiga, waxaad ka warqabtaa waxa dhacaya oo raadraacaadkana guud ahaan laguma raadin karo adiga shakhsi ahaan. Isku mid maahan runta raadinta. Xaqiiqdii, waxaad raadineysaa marxalado ku saabsan dhammaan wixii aad aqoon u leedahay. Iyo, in kastoo raadadkaan aan magacaaga kuugu jirin, waxay badanaa kugula xiriiri karaan adiga. Si kale haddii loo dhigo, waxay u eg yihiin fingerprints: aan la arki karin oo shakhsi ahaan loo aqoonsanayo.
Badi (qaybta 2.3.1)
Wixii intaa ka badan oo ku saabsan sababaha weyn ee natiijooyinka tirakoobka loo sameeyo, dhibaatooyinka imtixaanka, fiiri M. Lin, Lucas, and Shmueli (2013) iyo McFarland and McFarland (2015) . Arrimahaasi waa inay hogaamiyayaasha cilmi-baadhistu diiradda saartaa muhiimadda dhabta ah ee wax ku oolka ah halkii ay ka ahayd muhiimada ay leedahay.
Wixii intaa ka badan oo ku saabsan sida Raj Shetty iyo asxaabtuba u heleen helitaanka diiwaannada canshuurta, fiiri Mervis (2014) .
Datasets waaweyn ayaa sidoo kale abuuri kara dhibaatooyin xisaabeed oo guud ahaan ka baxsan awooda kumbuyuutarka hal. Sidaa daraadeed, cilmi-baarayaasha samaynta xisaabinta ee miisaaniyeyaasha waaweyn waxay badanaa ku baahiyaan shaqooyinka kombiyuutarada badan, habraac mararka qaarkood loo yaqaan barnaamijka isku midka ah . Hordhaca barnaamijka isku midka ah, gaar ahaan luqad lagu magacaabo Hadoop, fiiri Vo and Silvia (2016) .
Marwalba (ku xusan qaybta 2.3.2)
Markaad tixgelisid xogta marwalba, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo haddii aad isbarbardhigeysid dadka isku midka ah wakhtigooda ama haddii aad isbarbardhigeysid qaar ka mid ah kooxda isbeddelka; arag tusaale ahaan, Diaz et al. (2016) .
Degenaansho la'aanta (qaybta ¿sec: mid aan firfircoonayn? )
Buug caadi ah oo ku saabsan tallaabooyinka aan firfircoonayn waa Webb et al. (1966) . Tusaalooyinka ku jira buuggaas ayaa saadaaliyay da'da digital, laakiin weli way iftiiminayaan. Tusaale ahaan dadka isbedelaya dabeecadooda sababtoo ah joogitaanka kormeer ballaaran, arag Penney (2016) iyo Brayne (2014) .
Dareemisku waxay si aad ah ula xiriiraan cilmi-baadhayaashu waxay soo wacaan saamaynta dalabka (Orne 1962; Zizzo 2010) iyo saamaynta Hawthorne (Adair 1984; Levitt and List 2011) .
Lama fahmin (qaybta 2.3.4)
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan isku xirka diiwaangelinta, eeg Dunn (1946) iyo Fellegi and Sunter (1969) (taariikhiga) iyo Larsen and Winkler (2014) (casri). Nidaamo kuwan oo kale ah ayaa sidoo kale lagu horumariyey sayniska kombiyuutarka sida magacyada sida macluumaadka qeexaya, tusaale ahaan aqoonsiga, isku-habaynta magaca, helitaanka isku- (Elmagarmid, Ipeirotis, and Verykios 2007) iyo diiwaanka duubista duubista (Elmagarmid, Ipeirotis, and Verykios 2007) . Waxa kale oo jira habab qarsoodi ah oo ilaalin ah si loo diiwaan geliyo xiriirka aan u baahnayn gudbinta macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aqoonsiga (Schnell 2013) . Facebook sidoo kale wuxuu sameeyay hab lagu isku xiro diiwaankooda si loogu dhaqmo habdhaqanka; Tani waxaa la sameeyey si loo qiimeeyo tijaabo aan kuu sheegi doono cutubka 4 (Bond et al. 2012; Jones et al. 2013) .
Wixii faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan Shadish, Cook, and Campbell (2001) saxsanaanta, fiiri cutubka 3 ee Shadish, Cook, and Campbell (2001) .
Geli karin (qaybta 2.3.5)
Wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan mowqifka raadinta AOL, fiiri Ohm (2010) . Waxaan ku siinayaa talo ku saabsan iskaashi la leh shirkadaha iyo dawladaha cutubka 4 marka aan qeexayo tijaabooyinka. Qaar ka mid ah qorayaasha ayaa muujiyay walaac ku saabsan cilmi-baarista ku tiirsan xogta aan la heli karin, eeg Huberman (2012) iyo boyd and Crawford (2012) .
Mid ka mid ah jidka u wanaagsan cilmi-jaamacadeed si ay u bartaan helitaanka xogta waa in ay ka shaqeeyaan shirkad sida layli ah ama cilmi-booqanaya. Waxa intaa dheer in awood helaan xogta, habka this ayaa sidoo kale kaa caawin doontaa cilmibaadhe ka badan oo ku saabsan sida xogta la abuuray, taas oo muhiim u ah falanqaynta bartaan.
Marka la eego helitaanka xogta dawlada, Mervis (2014) hadlayaa sida Raj Chetty iyo asxaabtoodu ay u heleen diiwaannada canshuurta ee loo adeegsaday cilmi-baarista dhaqdhaqaaqa bulshada.
Aan wakiil ahayn (san: aan wakiil lahayn)
Isticmaalka Kruskal and Mosteller (1979a) , Kruskal and Mosteller (1979b) , Kruskal and Mosteller (1979c) , iyo Kruskal and Mosteller (1980) .
Soo koobidkeyga shaqo ee Barafka iyo shaqada Doll iyo Hill ayaa kooban. Wixii dheeraad ah oo ku saabsan shaqada Barafka ee daacuunka, fiiri Freedman (1991) . Wixii faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan Daraasaadka Dhakhaatiirta Ingiriiska eeg Doll et al. (2004) iyo Keating (2014) .
Cilmi-baarayaal badan ayaa la yaabi doona in ay bartaan inkastoo Doll iyo Hill ay ururiyeen xogaha dhakhtarrada dheddig-laboodka ah iyo dhakhaatiirta da'doodu ka yar tahay 35-jir, waxay si ula kac ah u isticmaali kari waayeen xogtan falanqayntoodii hore. Maaddaama ay ku doodeen: "Maadaama kansarka sanbabadu ay aad u yaryihiin haweenka iyo ragga da'doodu ka yar tahay 35 jir, tirooyinka faa'iidada leh kuma jiri karaan kooxahan dhawr sanadood oo soo socda. Warbixintan horudhac ah waxaanu ku xaddidnaa raggeenna da'doodu tahay 35 jir iyo wixii ka sarreeya. " Rothman, Gallacher, and Hatch (2013) , oo leh cinwaanka kicinta" Waa maxay sababta matalaadda loo ilaalin karo, "ka doodi guud ahaan qiimaha si ula kac ah u abuuraya macluumaad aan xaqiiq ahayn.
Nidaam aan ku-meel-gaar aheyn waa dhibaatada ugu weyn ee cilmi-baarayaasha iyo dawladaha doonaya in ay ka hadlaan dadweynaha oo idil. Tani way ka yar tahay walaaca shirkadaha, kuwaas oo inta badan diiradda saaraya isticmaalkooda. Wixii intaas ka badan oo ku saabsan siduu xisaabtamida Nederland u tixgelin lahaa arrimaha ku saabsan wax-ka-sheegis la'aanta ganacsiga weyn ee ganacsiga, fiiri Buelens et al. (2014) .
Tusaalayaasha cilmi-baarayaasha oo muujinaya welwel ku saabsan dabeecadda aan fiicnayn ee ilaha xogta waaweyn, fiiri boyd and Crawford (2012) , K. Lewis (2015b) , iyo Hargittai (2015) .
Si aad u faahfaahin dheeraad ah u sameyso hadafyada baaritaannada bulsheed iyo cilmi baarista cudurrada, fiiri Keiding and Louis (2016) .
Wixii intaa ka badan oo ku saabsan isku dayga isticmaalka Twitter si aad u sameysid tusaalooyinka dibadda ee ku saabsan codbixiyayaasha, gaar ahaan kiiskii doorashadii Jarmalka 2009, fiiri Jungherr (2013) iyo Jungherr (2015) . Ka dib marka la eego shaqada Tumasjan et al. (2010) cilmi-baarayaasha adduunka oo dhan waxay isticmaaleen habab fanaaneed - sida isticmaalka falanqaynta xasaasiga ah si ay u kala soocaan khilaafka wanaagsan iyo xun ee dhinacyada-si loo wanaajiyo kartida macluumaadka Twitter si loo saadaaliyo noocyo kala duwan oo doorasho ah (Gayo-Avello 2013; Jungherr 2015, chap. 7.) . Halkan waxa ah sida Huberty (2015) soo koobay natiijooyinka isku-daygaas si loo saadaaliyo doorashooyinka:
"Dhammaan siyaabaha loo saadaaliyay ee saameeya warbaahinta bulshada ayaa ku fashilantay markii ay soo rogeen baahida dhabta ah ee la filayo in la doorto doorashada. Dhibaatooyinkaasi waxay u muuqdaan inay ugu wacan yihiin sifooyinka asaasiga ah ee warbaahinta bulshada, halkii ay ka noqon lahaayeen dhibaatooyinka habdhiska ama algorithmic. Marka la soo gaabiyo, warbaahinta bulshada ma'aha, oo malaha waligiis marnaba, waxay soo bandhigaysaa sawirka wakiilada oo xasilan, aan cidi lahayn, sawirka wakiilada; iyo shaybaarrada fudud ee warbaahinta bulshada oo aan haysan xog ku filan si ay u xalliyaan dhibaatooyinkan kadib. "
Cutubka 3aad, waxaan ku sharxi doonaa tijaabinta iyo qiyaasidda faahfaahin dheeraad ah. Xitaa haddii xogta aan shaki ku jirin, shuruudaha qaarkood, waa la miisaami karaa si loo soo saaro qiyaaso wanaagsan.
Burburinta (qaybta ¿sec: drifting? )
Dhibaatada nidaamka ayaa aad u adag in laga arko dibadda. Si kastaba ha noqotee, mashruuca MovieLens (oo laga wada hadlo cutubka 4aad) ayaa la wadaa in ka badan 15 sano koox cilmi baaris ah. Sidaa darteed, waxay awoodeen in ay qoraan oo ay wadaagaan macluumaadka ku saabsan habka uu nidaamku u kordhay wakhtigii iyo sida tani u saameyn karto falanqaynta (Harper and Konstan 2015) .
Qaar badan oo ka mid ah culimada ayaa diiradda saari doona inay u gudbaan Twitter-ka: Liu, Kliman-Silver, and Mislove (2014) iyo Tufekci (2014) .
Mid ka mid ah habka wax looga qabanayo dadwaynaha waa in la abuuro guddi dadka isticmaala, taas oo u oggolaanaysa cilmi-baarayaasha in ay isla barbar dhigaan dadka isla markaa, fiiri Diaz et al. (2016) .
Algorithmically confessive (qaybta : sifo-wareersan? )
Waxaan marka hore maqlay ereyga "algorithmically conf confounded" uu isticmaalo Jon Kleinberg hadal, laakiin nasiib daro ma xasuusto goorta iyo meeshii hadalka la siiyey. Markii ugu horeysay ee aan arko ereyga daabacan wuxuu ahaa Anderson et al. (2015) , taas oo ah dood falanqeyn ah oo ku saabsan sida algorithms loo isticmaalo goobaha shukaansiga ay sii adkeyn karaan awoodda cilmi-baarayaasha inay isticmaalaan xogta laga helo boggaan internetka si ay u bartaan doorbidka bulshada. Walaacan waxaa kiciyay K. Lewis (2015a) si wax looga qabto Anderson et al. (2014) .
Intaa waxaa dheer, Facebook, Twitter ayaa sidoo kale ku talinaysa dadka in ay isticmaalaan si ay ula socdaan fikradda ah xidhitaanka triadic; eeg Su, Sharma, and Goel (2016) . Sidaa daraadeed heerka xidhitaanka triadic ee Twitter waa isku-dhafanaanta qaar ka mid ah dareenka aadanaha ee xiritaanka triadic iyo dabeecadaha algorithmic ee kor u qaadida xirashada triadic.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan fulinta-gaar ahaan fikradda ah in qaar ka mid ah aragtiyada sayniska sayniska ay yihiin "mashiinnada maaha kamaradaha" (sida, waxay qaabeeyaan adduunka halkii ay ku tilmaami lahaayeen) - Mackenzie (2008) .
Diri (qaybta 2.3.9)
Wakaaladaha dawliga ah ee dawladda waxay soo wacaan xogta nadiifinta xogta xogta . De Waal, Puts, and Daas (2014) ayaa tilmaamaya falanqaynta farsamooyinka farsamooyinka xogta lagu sameeyay xogta sahanka iyo in la eego heerka ay ku habboon yihiin ilaha xogta waaweyn, iyo Puts, Daas, and Waal (2015) soo bandhigaan fikrado isku mid ah daawadayaasha guud.
Wixii guud guud ee khadka bulshada, fiiri Ferrara et al. (2016) . Qaar ka mid ah tusaalooyinka daraasadaha ayaa diiradda saarey helitaanka spam ee Twitter, ka fiirso Clark et al. (2016) iyo Chu et al. (2012) . Ugu dambeyntii, Subrahmanian et al. (2016) sharxayaa natiijooyinka DARPA Twitter Bot Challenge, wada shaqeyn ballaaran oo loogu talagalay in ay isbarbardhigto qaababka lagu ogaanayo bots on Twitter.
Dareem (qaybta 2.3.10)
Ohm (2015) faahfaahin ka bixisay cilmi-baaris hore oo ku saabsan fikradda xogta xasaasiga ah waxayna bixisaa imtixaan badan. Afarta arrimood oo uu soo jeediyo waa baaxadda waxyeellada, suurtogalnimada waxyeellada, joogitaanka xiriirka sirta ah, iyo haddii halista ay ka tarjumeyso walaac weynaha.
Tirinta tirinta (qaybta 2.4.1)
Daraasadda Farber ee cashuuraha ee New York waxay ku saleysneyd daraasad hore oo ay sameysay Camerer et al. (1997) oo isticmaalay sadex shay oo kala duwan oo ka mid ah waraaqaha safarka warqadaha. Daraasadan hore ayaa lagu ogaaday in darawaliintu u muuqdaan in ay yihiin kuwa beegsanaya: waxay shaqeeyeen maalmo yar oo mushaharkoodu sarreeyo.
Shaqadan soo socota, Boqorka iyo asxaabtiisuba waxay sahamiyeen faafreebinta internetka ee Shiinaha (King, Pan, and Roberts 2014, [@king_how_2016] ) . Si loola socdo habka loo cabbiri karo faafreebka internetka ee Shiinaha, fiiri Bamman, O'Connor, and Smith (2012) . Wixii intaas ka badan oo ku saabsan qaababka tirakoobka sida kan loo isticmaalo King, Pan, and Roberts (2013) si loo qiyaaso dareenka 11-ka malyan ee posts, arag Hopkins and King (2010) . Wixii dheeraad ah oo ku saabsan barashada kormeerka, fiiri James et al. (2013) (farsamo ka yar) iyo Hastie, Tibshirani, and Friedman (2009) (farsamo ahaan).
Saadaalinta iyo wacyigelinta (qaybta 2.4.2)
Saadaashu waxay qayb weyn ka tahay sayniska xogta warshadaha (Mayer-Schönberger and Cukier 2013; Provost and Fawcett 2013) . Nooc ka mid ah saadaashaas oo inta badan ay sameeyaan cilmi-baarayaasha arrimaha bulshadu waa qiyaasida dadweynaha; Tusaale ahaan, tusaale ahaan, Raftery et al. (2012) .
Google Flu Trends ma ahayn mashruucii ugu horeeyay ee lagu isticmaalo macluumaadka raadinta hargabka cusub ee hargabka. Dhab ahaan, cilmi baarayaasha Mareykanka (Polgreen et al. 2008; Ginsberg et al. 2009) iyo Sweden (Hulth, Rydevik, and Linde 2009) waxay ogaadeen in shuruudaha qaarkood ee raadinta (sida "hargabka") ay saadaalisay ilaalinta caafimaadka qaranka xogta ka hor inta aan la sii deyn. Dhab ahaantii, mashaariic badan, mashaariic badan oo kale ayaa isku dayay in ay isticmaalaan macluumaadka raadinta dijitaalka ah ee lagu ogaanayo baadhitaanka cudurka; eeg Althouse et al. (2015) dib u eegis.
Marka lagu daro isticmaalka macluumaadka raadinta dijitaalka ah si loo saadaaliyo natiijooyinka caafimaadka, waxaa sidoo kale jira shaqo aad u tiro badan oo isticmaalaya xogta Twitter si loo saadaaliyo natiijooyinka doorashada; si loo eego Gayo-Avello (2011) , Gayo-Avello (2013) , Jungherr (2015) (cutubka 7), iyo Huberty (2015) . Soo bandhigida tilmaamayaasha dhaqaalaha, sida wax soo saarka guud ee gudaha (GDP), ayaa sidoo kale caadi ah bangiyada dhexe, fiiri Bańbura et al. (2013) . Jadwalka 2.8 waxaa ka mid ah tusaalooyin daraasado ah oo isticmaalaya nooc ka mid ah raadinta dijitaalka ah si loo saadaaliyo nooc ka mid ah dhacdooyinka adduunka.
Jaantus 2.8: Daraasado Isticmaalaya Xogta Weyn ee Loogu Talogalay Dhawaaqa Kale
Twitter Xafiiska Box-ka ee filimada ee Maraykanka Asur and Huberman (2010)
Diiwaan raadinta Ku iibinta filimada, muusikada, buugta, iyo ciyaaraha fiidiyowga ee Maraykanka Goel et al. (2010)
Twitter Dow Jones Industrial Average (Suuqa stock stocks) Bollen, Mao, and Zeng (2011)
Warbaahinta bulshada iyo qoraalada raadinta Daraasado ku saabsan dareenka maal-gashiga iyo suuqyada saamiyada ee Maraykanka, Ingiriiska, Kanada, iyo Shiinaha Mao et al. (2015)
Diiwaan raadinta Ka hortagga xumadda Dengue ee Singapore iyo Bangkok Althouse, Ng, and Cummings (2011)
Ugu dambeyntii, Jon Kleinberg iyo asxaabtiisaba (2015) ayaa tilmaamay in dhibaatooyinka la saadaalinayo ay yihiin laba qaybood oo kala duwan, iyo saynisyahanno bulsheed ayaa isku dayay in ay diirada saaraan halna ayna iska indha tiraan kuwa kale. Imisa hal siyaasad dejiye, waxaan ku soo wici doonaa iyada Anna, oo la kulma abaar iyo in ay go'aamiso in ay shaqaaleysiinayso shaman si ay u sameeyaan qoob ka ciyaarka si ay u kordhiyaan fursadda roobka. Siyaabe kale oo siyaasad dejiye ah, waxaan u wici doonaa Betty, waa in ay go'aamiso haddii dallad si ay u shaqeyso si looga fogaado in qoyaan lagu sameeyo guriga. Anna iyo Betty labaduba waxay samayn karaan go'aan wanaagsan haddii ay fahmaan cimilada, laakiin waxay u baahan yihiin inay ogaadaan waxyaabo kala duwan. Anna waxay u baahan tahay inay fahmaan haddii qoob ka ciyaarka roobka uu keeno roob. Betty, dhanka kale, uma baahna in uu wax ka fahmo sababaha keena; waxay kaliya u baahan tahay saadaasha saxda ah. Cilmi-baarayaasha arrimaha bulshadu waxay inta badan diiradda saaraan dhibaatooyinka sida soo wajahday Anna- taas oo Kleinberg iyo saaxiibadeen ay ugu yeeraan dhibaatooyinka siyaasadeed ee loo yaqaan 'dheelka' dhoobada '-waxay ku lug leeyihiin su'aalaha sababaha keena. Su'aalaha sida Betty-ka ah Kleinberg iyo asxaabtoodu waxay u yeeraan dhibaatooyinka siyaasadeed ee "dallad-sida" -waxay noqon karaan kuwo aad u muhiim ah, laakiin waxa ay ka heleen wax yar oo ka soo baxa cilmi-baarayaasha arrimaha bulshada.
Imtixaanaadka qiyaasidda (Qaybta 2.4.3)
Suxufiga PS Siyaasadda Siyaasadeed wuxuu ku saabsanaa xog muhiim ah, natiijo naqdi ah, iyo aragtida rasmiga ah, iyo Clark and Golder (2015) soo koobay wax kasta oo ku darsaday. Jariidada Akhriska Machadka Qaran ee Sayniska ee Maraykanka ayaa waxay kaqaybqaateen faragalinta iyo xogta weyn, iyo Shiffrin (2016) soo koobaysaa waxtarka kasta. Mashruucyada mashiinka barashada ee isku dayaya in ay si toos ah uga soo baxaan tijaabooyinka dabiiciga ah gudaha gudaha ilaha xogta, fiiri Jensen et al. (2008) , Sharma, Hofman, and Watts (2015) , iyo Sharma, Hofman, and Watts (2016) .
Marka la eego tijaabooyinka dabiiciga ah, Dunning (2012) bixiya daaweyn hordhac ah, oo leh tusaalooyin badan. Si aad uga walaacsan tahay tijaabooyinka dabiiciga ah, fiiri Rosenzweig and Wolpin (2000) (dhaqaalaha) ama Sekhon and Titiunik (2012) (sayniska siyaasadeed). Deaton (2010) iyo Heckman and Urzúa (2010) ku dooday in diiradda la saarayo tijaabooyinka dabiiciga ah ay u horseedi karaan cilmi-baarayaasha in ay diiradda saaraan qiyaasaha saameynta aan macquul ahayn; Imbens (2010) waxay ku tirinaysaa doodahaan iyada oo leh aragti aad ufiican ee qiimaha tijaabooyinka dabiiciga ah.
Marka la qeexayo sida uu cilmi-baadhuhu u tegi karo qiyaasida saameynta ah ee loo adeegsanayo saamaynta adeegga, waxa aan ku sharaxay farsamo la yidhaa doorsoomayaasha qalabka . Imbens and Rubin (2015) , cutubyada 23 iyo 24, waxay bixiyaan hordhac ah waxayna isticmaalaan qorista bakhtiyaa-nasiibka tusaale ahaan. Saameynta adeegga milatari ee ku saabsan cilaaqaadka waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa saamiga celceliska cillad-celinta (CAcE) iyo mararka qaarkood saameynta daaweynta celceliska gudaha (LATE). Sovey and Green (2011) , Angrist and Krueger (2001) , iyo Bollen (2012) bixiyaan dib-u-eegis ku saabsan isticmaalka isbeddelka qalabka ee sayniska siyaasadeed, dhaqaalaha, iyo cilmiga bulshada, iyo Sovey and Green (2011) waxay bixiyaan liiska "liiska akhristaha" qiimaynta daraasadaha iyadoo la adeegsanayo doorsoomeyaasha qalabka.
Waxay soo baxday in bakhtiyaa-nasiibeedka 1970-kii aanu ahayn, xaqiiqda si haboon loo kala soocay; waxaa jiray kala-shaandhayn yar oo aan kala sooc lahayn (Fienberg 1971) . Berinsky and Chatfield (2015) ku doodaya in khalkhalka yar yar uusan ahayn mid muhiim ah oo ka wada hadla muhiimadda si habboon loo kala sooco.
Marka la eego isbarbardhigga, fiiri Stuart (2010) si dib-u-eegis lagu rajo-geliyo, iyo Sekhon (2009) ee dib-u-eegis lagu sameeyo. Wixii intaa ka badan oo ku saabsan isku midka ah ee manjooyin, eeg Ho et al. (2007) . Helitaanka hal cayaar oo qumman oo qof waliba way adag tahay, tani waxay soo bandhigaysaa tiro badan oo adag. Ugu horeyn, marka qalabka saxda ah aan la helin, cilmi-baarayaashu waxay u baahan yihiin inay go'aansadaan sida loo cabbiro masaafada u dhaxeysa laba qaybood iyo haddii masaafada la dhigo ay ku dhowdahay. Dhibaato labaad ayaa soo baxda haddii cilmi-baarayaashu ay rabaan inay isticmaalaan kulamo kala duwan kiis kasta ee kooxda daaweynta, tanina waxay horseedi kartaa qiyaaso sax ah. Labada arrimoodba, iyo sidoo kale kuwa kale, ayaa si faahfaahsan loogu sharxay cutubka 18 ee Imbens and Rubin (2015) . Eeg qaybta II ee ( ??? ) .
Eeg Dehejia and Wahba (1999) tusaale ahaan hababka isbarbar-dhigga ay awood u yeelan karaan in ay soo saaraan qiyaaso la mid ah kuwii ka soo baxay tijaabin la xakameeyey. Laakiin, fiiri Arceneaux, Gerber, and Green (2006) iyo Arceneaux, Gerber, and Green (2010) tusaale ahaan hababka isbeddelka ku fashilmay inay soo saaraan cabbir tijaabo ah.
Rosenbaum (2015) iyo Hernán and Robins (2016) bixiyaan talo kale oo lagu ogaanayo isbarbardhigga waxtarka leh ee ku jira ilaha xogta waaweyn.